‘जसरी पनि बचाइदिनुस् डाक्टर’साब ! यो छोरो रहेन भने‍‍‘....’ - ।। Naya Kuro ।।
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:३१ June 6, 2019 Naya KuroLeaveaComment on ‘जसरी पनि बचाइदिनुस् डाक्टर’साब ! यो छोरो रहेन भने‍‍‘….’
सिञ्जा, २३ जेठ । जुम्लाको तिला गुफा नगरपालिकाका ६२ वर्षीय भक्तबहादुर बोगटी जुम्लास्थित कर्णाली प्रतिष्ठान अस्पतालमा पाँच वर्षीय छोरा विशाल बोगटीको उपचारमा हुनुहुन्छ ।
घरनजिकैको स्कूल जाँदै गर्दा बाटोमा जङ्गली फल मचैनो खाँदा बिरामी भएका छोराको स्वास्थ्य अवस्था निकै चिन्ताजनक भएपछि उहाँ अस्पताल आइपुग्नुभयो । अस्पतालमा उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो एक्लो छोरा हो । जसरी पनि बचाइदिनुस् डाक्टर’साब । यो छोरो रहेन भने म पनि रहनेछैन ।”
अहिले उहाँका छ छोरीको विवाह भइसकेको छ । कान्छी छोरी, एक छोरा र श्रीमती मात्र साथमा रहेका उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमै छोरा जन्मिएको भए लालनपालनमा राहत मिल्थ्यो होला । छोरी भए, अर्काको घर गए, एक्लो बनाए । अहिले सहाराविहीनझैँ छु ।”
कर्णाली प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले छोराको आसमा सात छोरी जन्माएका उहाँले एक्लो छोरा बचाउन गरेको हारगुहारले अस्पतालको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गली फल खाँदा त्यसको असर दिमागमा परेको देखियो । छोरो छटपटाउन थाल्यो । बाबु उपचारका लागि रोइकराइ गर्न थाले । तर बिहानै निको भएर छोरा बोल्न थालेपछि मुहारमा खुशी देखियो ।”
सात छोरीको बीचमा जन्मिएको छोरो बिरामी हुँदा घरपरिवारमा निकै रुवावासी चलेको उहाँ बताउहुन्छ । “निको भएर घर फर्कुंला भन्ने आस थिएन”, बोगटीले भन्नुभयो, “अब छोरा निको भएपछि खुशीसाथ घर फर्कंदै छु । छोराको उपचार हुन नसकेको भए म घर फर्कने थिइनँ । अब खुशीका साथ फर्कन्छु, छोराले पुनःजन्म पायो ।” –रासस
‘कोरोना भाइरस रोकथाम कोष’मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
१९ चैत्र २०७६, बुधबार ०८:२० April 1, 2020 Naya Kuro
क्वारेटाइनमा बस्दै आएका एक जनाको मृत्यु
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १५:१२ May 30, 2020 Naya Kuro